Inxaxheba yemfundo yempilo ekuphuhlisweni komntwana ayinakwenzeka kakhulu. Abasebenzi be-nursergart kwimfundo yomntwana bakhokelwa yintetho ekhethekileyo. Le ngcamango yinkcubeko yomntwana. Makhe siqwalasele, yintoni indima ekuphuhlisweni kwezemidlalo zengane.
Isidingo semfundo yomzimba kumntwana
Imfundo yenyama yomntwana ibalulekile kwaye kufuneka iphuhliswe. Ucwaningo luye lwabonisa ukuba malunga ne-15% yabantwana abangaphantsi kwe sixhenxe banempilo. Ukuphuhliswa kokuvisisana komntwana, imfundo ehambelanayo nemfundo iyimfuneko. Kwimeko yobudala be-"nursergart" umzimba womntwana ukhula ngokukhawuleza. Ngeli xesha, ngokukhawuleza ukuphuhlisa i-musculoskeletal, ne-nervous, ne-cardiovascular system, kunye nokuphucula inkqubo yokuphefumla. Ngeli xesha, isiseko sophuhliso lomzimba kunye nesiseko sempilo sabekwa. Ngeendlela ezininzi, impumelelo yomsebenzi othile kuxhomekeke kwimfundo yomzimba yomntwana. Imfundo yezemvelo yenye yezinto eziphambili ekuphuhliseni ubuntu.
Inendima edlalwa yile nkqubo yokukhulisa umntwana
Indima yemfundo engokwenyama ebuntwaneni kukuqinisa impilo yentsana ngokuphucula zonke iinkqubo zomzimba: ukumelana nokuchasene nemeko engqongileyo ngokusingqongileyo. Le miba enjengeemitha zelanga, ukushisa okuphantsi kunye nokuphezulu kwamanzi okanye umoya, umswakama ophezulu, njl.
Imfundo yemvelo kunye neemeko zokucoceka (ukondla, i-regimen yemihla) inendima enkulu ekuqiniseni imoto kunye nophuhliso lwengqondo. Xa usemncinci, kukho ukulungiswa okuqinileyo kwezixhobo zokuphefumula kunye neenqwelo zomzimba. Ngexesha elifanayo, ubunzima benhliziyo buyanda, kwaye amandla akhe okuguqulela kunye namandla okunyuka komsebenzi. Imfundo yemvelo inefuthe elihle kwinkqubo yokuphefumula komntwana. Ukunyusa umoya kunye nokunyuka kokunyuka kokuphefumula kunye nokwanda kwe-oksijini kwandisa.
Sinokuthi imfundo yemvelo yinkqubo enkulu yokufundisa, ejoliswe ekufezekiseni iinkalo eziphambili zophuhliso lolutsha. Indima yemfundo yenyama yile ndlela ilandelayo.
Ukwenza nokuza kunye neendlela ezahlukahlukeneyo zokufunda kunye nokuzivocavoca umzimba, inkunzi ifunda ukubonisa iimvakalelo zakhe kunye nengqondo. Oku kunceda ukuphuhlisa amandla akhe okudala. Ngexesha lokusebenza kwemisebenzi eyahlukeneyo eyinkimbinkimbi, inkqubo yokulwa neengxaki ivela, umntwana uhlakulela iimpawu ezinamandla. Ukuphuhlisa: ukuzithemba nokuzithemba, iimvakalelo zokuzikhukhumeza nokuzithemba, xa uqeqesho olunzima lwenziwa ngempumelelo. Umntwana ngeli xesha ufunda ukunqoba ukwesaba kunye neentloni. Xa wenza ukudibanisa okubonakalayo, umntanomncinci uyanciphisa uxinzelelo lwesisu kunye nomoya, kwaye oku kukuthintela uxhalaba.
Kodwa oku akuyona inxaxheba yonke yemfundo yenyama yomntwana. Ukuzivocavoca umzimba ngokuchanekileyo, ngesantya esithile kunye nokuhambelana, umntwana uhlakulela ukucinga, ukuzinza, ukugxininiswa kunye nokuphendulwa kwempendulo. Izenzo ezahlukeneyo zomzimba, apho izinto zisetyenziselwa (iikhephe, iibhola, intambo, njl. Njl) zinceda ekuphuculeni ukulungelelaniswa kwemoto. Ukuqhuba amaqhinga omzimba, ukhulisa amandla okuhamba kwindawo, kwaye oku kubalulekile kunoma yimuphi umsebenzi wabantu. Ukongezelela kukho konke oku, ukuqeqeshwa kwenkqubo yokuncedisa kunceda ukwakha izakhono zokuphila ngendlela enempilo. Ngoko ke, ekuphuhlisweni komntwana, imfundo yempilo inendima ebalulekileyo.
Indlela yokulondoloza impilo yomntwana, incoko yabazali
Ngendlela efanelekileyo ukutshisa ilanga kumntwana?
Indlela yokukhulisa umntwana onempilo kunye nohlakaniphile?
Ikhekhe leshokoleta nge-hazelnut
Ukupheka okulula kunye nesebenzayo kumaski okuqinisa iinwele
Indlela yokupheka isaladi yomnandi ye-broccoli?
Adenoiditis, ke, unyango, ukuthintela
Iholide enkulu kakhulu yonyaka, okanye njengoko kuphawulwe yiHalloween
Iimpawu zokucebisa usebenzisa ubumba obomvu
Ii-Muffins ngokufafaza kunye ne-vanilla glaze
Uthakazeliso lwemvelo: iqoqo leJ J. Crew kwimisebenzi yangaphandle